Global Voices teny Malagasy » Koreana Tavaratra Sady Mpanao Sariitatra Maneho An-tsary Ny Fiainan’ireo Olona Nandositra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Jolay 2017 15:00 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Korea Atsimo, Korea Avaratra, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Zavakanto & Kolontsaina
Avy eto ankavia, manontany ny mpitsoa-ponenana iray , “Azonao antoka ve fa tena afaka mihinana izay ilaintsika isika ?” Eto amin'ny ankavanana , hoy ny vehivavy iray nandao ny fireneny , “Efa simba avokoa ny sakafo rehetra ato amin'ity toeram-pisakafoana ity.” Mampiasa ny teny anglisy hoe “buffet” (sakafo) ny Koreana Tatsimo izay mitovy fanonona amin'ny teny Koreana hoe “simba.” Zava-tsarotra ho an'ny mpitsoa-ponenana Koreana Tavaratra maro ny mianatra ireo teny vahiny nindramina rehetra izay lasa anisan'ny fiteny tatsimo mahazatra. Sary: Choi Seong-guk
Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 6 Jolay 2017 ity tantara avy amin'i Jason Strother  ity. Ary navoaka eto indray izany ho anisan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny Global Voices sy ny PRI.
Toa tsy tahaka ny tantara mampihomehy ny fitsoahan'ny Koreana Tavaratra manodidina ny 30.000 nandao ny fireneny ho any Korea Atsimo. Kanefa miezaka ny hitondra vazivazy amin'ny dia sy ny fanorenam-ponenana izay matetika sarotra ny andiana tantara an-tsary antserasera izay noforonin'ny mpitsoa-ponenana Koreana Tavaratra iray, mipetraka ao Seoul amin'izao fotoana.
Taorian'ny nitsoahany ho any Korea Atsimo tamin'ny taona 2010, nahatsapa i Choi Seong-guk, 37 taona, fa tsy mitovy intsony ny firenena Korea roa tonta, hita fa nisy ny fahasamihafana teo amin'ny kolontsaina sy fiteny maro nandritra ny 70 taona mahery nisian'ny fisarahana.
Iray amin'ireo fahasamihafana voalohany niseho ho an'i Choi , izay efa niasa tao amin'ny trano famokarana sarimiaina voalohany Pyongyang, SEK, ny tsy fitovian'ireo sariitatra avy any atsimo sy avy any avaratra.
“Tsy azoko ny tian'ny sariitatra Koreana Tatsimo hambara raha vao nahita izany voalohany aho,” hoy izy. “Tsy nisy tantara fitiavan-tanindrazana, na fisamborana mpitsikilo na ny ady. Toa tsy misy dikany izy ireo amiko. “
Raha mbola kely i Choi dia efa nanana talenta tamin'ny fanaovana sary rehefa nidera azy ny mpampianatra noho ny sary nataony mampiseho ny miaramila Amerikana ratsy fanahy izay nolazainy fa nataony araka izay azony atao mba ho toy ny ” faran'izay ratsy tarehy sy mahery setra indrindra.”
Ity ny sary noforonin'i Choi fony izy mbola mpianatra izay mampiseho ny miaramila Amerikana iray mandaka ny miaramila Koreana Tatsimo iray raha niomana ny hiampita ny sisintany ho any korea Avaratra izy ireo . Hoy ny vakin'ny soratra , “Fanafihana avy any Atsimo .” Sary: Choi Seong-guk
Tamin'ny taona 2016, niverina nanao sary indray i Choi ary nanomboka ny tantara an-tsary antserasera antsoina hoe “Rodong Shimmun,” izay midika hoe “fakana am-bavany mpiasa” , lalaonteny amin'ny anaran'ny gazetin'ny mpiasa “Rodong Shinmun,” any Korea Avaratra izy ity .
Mampiseho vondrona mpitsoa-ponenana vao tonga ny andian-tantara manesoeso, rehefa nandia ny volana voalohany tao Korea Atsimo izy ireo tao amin'ny foibe izay tantanan'ny governemanta . Nanao fanesoana ny ‘Newbie-Ness’ (maha-vao tonga) azy ireo i Choi tahaka ilay fahagagan'izy ireo momba ny sakafo rehetra tao amin'ny trano fisakafoanana nahitana ‘buffet’ (sakafo tsy lany laniana).
Maneho ny tantaran'ny mpitsoa-ponenana iray voadonam-pitiavana ihany koa izy, izay nolazainy fa mifototra amin'ny tsy fahazoan-kevitra ara-kolontsaina mahasadaikatra.
Nihaona tamin'ny vehivavy Koreana Tatsimo iray ny mpitsoa-ponenana, izay nilaza taminy hoe “Mahafinaritra. Tsy mbola nahita olona Koreana Tavaratra aho hatramin'izay. Azoko alaina ve ny laharan'ny findainao ?” Sary: Choi Seong-guk
“Nihaona tamin'ny vehivavy Koreana Tatsimo iray aho indray mandeha, izay nangataka ny laharan'ny findaiko ary nilaza tamiko izy fa te ho lasa namako,” Hoy izy nampahatsiahy. “Toa diso fandray aho, fa noheveriko hoe te hanambady ahy izy.”
Nanohy ny fampiasany ny teny fanehoana fitiavana izay fampiasa mahazatra any Korea Atsimo ilay vehivavy. Ao anatin'ny andiana lahatsoratra manaraka , manazava amin'ny mpamaky ny fomba nahatonga izany ho famantarana voafangaro i Choi .
“Any Korea Avaratra, ireo mpifankatia ihany no mifampiresaka tahaka izany. Eo amin'ny samy mpinamana , ‘kamarady’ (namana) no hiantsoana ny tsirairay. “
Tsy ny sarin'i Choi rehetra anefa no mampihomehy fa misy ihany koa ny sasany izay mampiseho ny sarin'ny olona mosarena eny an-dalambe any Korea Avaratra .
Ahitana ny topimaso momba ny fiainana ao Korea Avaratra ny andiana tantara an-tsarin'i Choi. Eto amin'ity sary ity, hoy ilay olona, “Hey, mety ho faty ianao. Aleo isika mihinana ity bozaka ity.” Sary: Choi Seong-guk
Ny hafa indray mampiseho ny fomba nandosiran'ny mpitsoa-ponenana sasany tao anatin'ny tifitra avy amin'ny mpiambina ny sisintany.
Manantena i Choi fa hanampy amin'ny fanovana ny fomba fisainan'ny Koreana Tatsimo, izay tsy miraika amin'ny mpitsoa-ponenana Koreana Tavaratra amin'ny ankapobeny ny andian-tantara an-tsariny.
Mivaky toy izao ny fanazavana eo ambonin'ny sary : “Miankina amin'ny ain-dehibe ny fandosirana an'i Korea Avaratra. Na dia voatifitra sy mianjera aza ny iray amin'ny fianakavianao, dia tsy maintsy manohy ny fandosirana hatrany ianao.” Sary: Choi Seong-guk
Ary mety handaitra izany.
Nahazo mpijery an'aliny ankehitriny ny “Rodong Shimmun” ary naneho hevitra ny mpamaky sasany fa hoe manampy azy ireo hahatakatra kokoa ny fahasamihafana ara-kolontsaina misy eo amin'i Korea Avaratra sy Atsimo izany. Ny hafa indray nanoratra fa mahatsapa kokoa ny fahorian'ny mpitsoa-ponenana izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/24/104184/
 Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org: https://www.pri.org/stories/2017-07-06/north-korean-refugee-and-cartoonist-draws-what-life-those-who-escape